Sticky Notes ! အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ပင်မစာမျက်နှာ » အက်ပ်များ » ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် » Sticky Notes !
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် | 16.0MB
မှတ်စုများ! သင်၏ Android စက်တွင်မှတ်စုများနှင့်သတိပေးချက်များကိုဖန်တီးရန်အဆုံးစွန် application တစ်ခုဖြစ်သည်။
မှတ်စုများကိုအနိမ့်ဆုံးကလစ် နှိပ်၍ သွားရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီး Sticky Notes သည်အခြားမှတ်စုများကိုအက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုရလွယ်ကူမြန်ဆန်စေသည်။ အက္ခရာမျိုးစုံနှင့်စာသားအရွယ်အမျိုးမျိုးသည်အသုံးပြုရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ သင်သည်သင်၏မှတ်စုများတွင်တံဆိပ်များကိုသတ်မှတ်ပြီးအလွယ်တကူစုစည်းနိုင်သည်။
သင်၏လိမ္မာသောအတွေးများကိုစေးကပ်သောရုပ်ပုံပေါ်တွင် တင်၍ လူမှုရေးမီဒီယာတွင်အလွယ်တကူမျှဝေနိုင်သည်။ စတစ်ကာများကိုအမြန်သွားရန်သင်ပွတ်ဆွဲနိုင်သည် သတိပေးချက်အသစ်နှင့်အလုပ်တစ်ခုကိုသင်ဘယ်တော့မျှမေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်၏ခလုတ်များကိုရှာဖွေခြင်းသည်ရှာဖွေရေးခလုတ်ကိုအသုံးပြုခြင်းထက် ပို၍ မြန်သည်။ ဂူဂဲလ်ရှာဖွေဝစ်ဂျက်တွင်ရှာဖွေမှုရလဒ်များထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်သင်၏စခရင်မှတိုက်ရိုက်စာသားများကိုပင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
* Elegant UI - စတစ်ကာမှတ်စုများကိုဖန်တီးခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းကိုလျင်မြန်စွာဝင်ရောက်ပါ။
Cool themes များ။
* အလွယ်တကူစီစဉ်။ စုစည်းပါ။
Tablet နှင့်လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ * သင်၏ Sticky များကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ တွစ်တာ၊ အီးမေးလ် (သို့) SMS သို့လွယ်ကူစွာမျှဝေပါ။ အေးမြစေးကပ်သောပုံများ ဖန်တီး၍ လွယ်ကူစွာမျှဝေပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အက်ပလီကေးရှင်းမပါဘဲတင်ပို့ခြင်းကိုဖွင့်နိုင်သည်။
* သင်၏မှတ်စုများကိုဖတ်ရန်စာသားမှမိန့်ခွန်း။ ။ * သိမ်းဆည်းထားသည့်မိတ္တူများကိုဖန်တီးရန်နှင့်ဒေတာဆုံးရှုံးမှုမှကာကွယ်ရန် Dropbox အကောင့် / ဂူဂဲလ်ဒရိုက်ကို အသုံးပြု၍ အရန်ကူးခြင်းနှင့်ပြန်ယူခြင်းလုပ်ဆောင်ချက် သတိပေးချက်များကိုလွယ်ကူစွာစစ်ထုတ်ခြင်းနှင့်စုစည်းခြင်းအတွက်ရှုပ်ထွေးပွေလီမှုကိုရှောင်ရှားရန်။
* Labels - မှတ်စုထည့်ရန်အက်ပလီကေးရှင်းအိုင်ကွန်ဖြတ်လမ်း (ထောက်ခံသည့်လွှတ်တင်မှုများသာ) ။
* သတိပေးချက်ဘားမှသတိပေးချက်ကိုတိတ်ဆိတ်စွာဖယ်ရှားပစ်ပါ (သို့) snooze ။ ။ * Integrated QR / Barcode စကင်နာ - စကင်ဖတ်စစ်ဆေးထားသောကုဒ်ကို အသုံးပြု၍ စတစ်ကာမှတ်စုကိုလျင်မြန်စွာဖန်တီးပါ။
မှတ်ချက်: ဖုန်းအခြေအနေခွင့်ပြုချက်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်သာအသုံးပြုသည်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတိုးတက်နေပါကအချက်ပေးအသံအတိုးအကျယ်။
Stick Notes ကို အသုံးပြု၍ ကောင်းမွန်သောအချိန်ဖြစ်ပါစေ။
ဘာထူးသလဲ Sticky Notes !